नौ वर्षको उमेरमै इन्जिनियरिङमा स्नातक पूरा गर्दै « Dhankuta Khabar
नौ वर्षको उमेरमै इन्जिनियरिङमा स्नातक पूरा गर्दै
प्रकाशित मिति : 1 February, 2020
शिक्षकले सिमोनलाई ‘अत्यन्त असाधारण’को संज्ञा दिए । सिमोन स्नातकपछि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमै पीएचडी गर्ने योजनामा छन् । पीएचडीसँगसँगै लरेन्टले मेडिकल डिग्री पनि अघि बढाउने सिमोनका पिताले बताए ।
लरेन्टको प्रतिभा पहिलो पटक उनका हजुरबुवा–हजुरआमा पहिचान गरेका थिए । उता लरेन्टका अभिभावक लिडिया र एलेक्जेण्डर सिमोन्सले आफ्ना आमाबुबाबाट छोराको प्रतिभाबारे सुन्दा सुरुमा नपत्याएको बताए । तर पछि लरेन्टका शिक्षकले पनि उनको प्रतिभाबारे पुष्टि गरेका थिए ।
विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्नु अघि लरेन्टलाई कयैन जाँच लिइएको थियो । त्यस क्रममा शिक्षकहरुले लरेन्टको सिकाई क्षमतालाई ‘स्पोन्ज’सँग तुलना गरे । लरेन्टको आमाबुवा दुवै चिकित्स भए नि ती आफ्नो बच्चाको असाधारण प्रतिभाबारे व्याख्या गर्न सकिरहेका छैनन् । तर लरेन्टकी आमा लिडिया भने ठट्टा गर्दै लरेन्ट गर्भमा हुदाँ आफूले धेरै माछा खाएको बताउँछिन् ।
उता लरेन्ट अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालयमा शिक्षा निर्देशक रहेका सोएर्ड हल्शोफ यसलाई असामान्य मान्दैनन् । सानै उमेरमा खेलकुदमा असाधारण प्रतिभा हुने बालबालिकाजस्तै केहीमा अध्ययनको क्षमता हुने हल्शोफले बताए ।
तथापि लरेन्टको प्रतिभा ‘असाधारण’ रहेको हशोफले स्वीकारे । लरेन्टको ज्ञान हासिल गर्ने क्षमता तीव्र भए पनि उनको अभिभावक उनलाई उमेर अनुसार रमाइलो गराउन पनि ध्यान दिएको बताए ।
‘उ जतिखेरै गम्भिर मात्र होस् भन्ने हामी चाहदैनौं । ऊ आफूले जे मन पर्छ त्यही गरोस् ,’ एलेक्जेण्डरले भने ,‘उसले आफ्नो बालापन र प्रतिभाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ । ’
काठमाडौ । बिहिबार पश्चिम नेपालको आकाशमा अनौठो बस्तु देखिएको छ । आगोको ज्वाला
पश्चिम नेपालको आकाशमा देखियो अनौठो बस्तु, सामाजिक सञ्जालभर तस्बिर भाइरल
काठमाडौं । बिहिबार पश्चिम नेपालको आकाशमा अनौठो बस्तु देखिएको छ । आ,गोको ज्वा,ला
मृ त्यु सर्टिफिकेटमा लेखियो उज्ज्वल भविष्यको का मना !
एजेन्सी– सरकारी कर्मचारीहरुले कहिलेकांही गर्ने कामहरु निकै चर्चामा आउँछन् । नआउन् पनि किन
चमेरा रुखमा उ ल्टो किन झु ण्डिन्छन् ? थाहा पाउनुस् र हस्य
एजेन्सी । चमेरा स्तनधारी प्राणी हो। चमेरा उड्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर,